August 2020 - MinSayYar
31st August 2020 Editor
ပန်းရောင်းနေကြတဲ့ကလေးတွေအတွက် မျက်နှာ အကာအကြည်၊နှာခေါင်းစည်းနဲ့လက်သန့်ဆေးရည်တွေလှူဒါန်းသွားမယ့် Sinon
ပရိသတ်အချစ်တော် Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲ့ချို့တဲ့သူတွေနဲ့ အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ထောက့်ပံ့လှူတန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ အမြဲကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းတတ်တဲ့ အပြုအမှုလေးတွေကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်ဖြစ်နေရတာပါ။ ဖီလပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon ကတော့ မနက်ဖြန်မှာ ပန်းရောင်းနေကြတဲ့ကလေးတွေအတွက် မျက်နှာ အကာအကြည်၊နှာခေါင်းစည်းနဲ့လက်သန့်ဆေးရည်တွေလှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်းကို “လမ်းမပေါ်က ပန်းရောင်းနေကြတဲ့ကလေးတွေ အတွက် ကျတော်ကမနက်ဖြန် မျက်နှာ အကာအကြည် မျက်နှာတပ်နှာခေါင်းစည်းတွေ လက်သန့်ဆေးရည် တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Covid-19က ပြန်ဖြစ်ပွားနေပါပီ ကျတော်တို့ရန်ကုန်မှာကောတစ်နိုင်ငံလုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့်ကျတော်တို့ ကောင်းကောင်းကာကွယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျဝောာ်တို့ပတ်ဝန်းကျင် မိသားစုတွေကိုပေါ့! ကျတော်တို့က ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့Virusတိုင်းထက်ပိုအင်အားကောင်းတယ် ကျတော်တို့ မှာကျတော်တို့ ရှိတယ် လေ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဂရုစိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ပေါ့။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ Sinonကတော့ မနက်ဖြန်သွားရောက်လှူဒါန်းမှာတဲ့နော်။ […]
ထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကျောက်ပန်းချီကားနဲ့ ရှေးဟောင်းစေတီတော်
ထူးထူးျခားျခား ပေါ်ပေါက္လာတဲ့ ရွေးဟောင်းကေ်ာက္ပန်းခ်ီကားနဲ့ စေတီဘုရား….ထူးထူးျခားျခား ပေါ်ပေါက္လာတဲ့ ကေ်ာက္ပန်းခ်ီကားနဲ့ စေတီဘုရား မြန်ျပည္နယ် ပေါင်မြို့ကဒါရပ္ကြက် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းကေန တောင္တန်းကို လွမ်းမွေ်ာ်ကြည့်လိုက်ရင် ေရွှေရာင္တဝင်းဝင်းနဲ့ စေတီလေးဖူးတြေ့ရမွာပါ။ထိုစေတီလေးရဲ့ထူးျခားမှုကေတာ့ နဂါးမယ်တ္ပောုံပဲ ျဖစ္ပါတယ်။ ဆေးရေးပန်းခ်ျီဖစ်ပြီး အျမင့်ကေတာ့၃၈ တောင္ခန့်ရွိတယ်။ ပေါင်မြို့နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးပန်းခ်ီကား ျဖစ္ပါတယ်။ကေ်ာက်တောင္နံရံပေါ်မွာ ရေးဆြဲထားတဲ့ပုံလေးပါ။ ပေါင်မြို့ကေန လွမ်းကြည့်ပါက စေတီသာ ျမင်ရမွာပါ။အခုတော့ ထိုဆေးရေးပန်းခ်ီကို ကုသိုလ်ျဖစ် စေတနာရွင္လူတစ္စုက ရွေးမူမပ်က်ျပန္လည်ပြီး ဆေးတင်ျခင်းျပုလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ်။ပေါင်မြို့ရဲ့ရွေးဟောင်းလက်ရာဆိုလည်း မမြားပါဘူး။သြားခ်င္တယ္ဆိုရင်တော့ ဆုတောင်းျပည့်ဘုရား တက္တဲ့လမ်းက တက္လို့ရသလို နန်းတ္ကောုန်းသြားတဲ့လမ်းကလည်း တက္လို့ရတယ္လို့ မိတ်ဆြေ တစ်ဦးကျေပာျပပါတယ်။နတ်သား(ပုံ-ကိုအောင်သိုက္ဆီကကူးယူဖော်ျပသည်)ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ရှေးဟောင်းကျောက်ပန်းချီကားနဲ့ စေတီဘုရား…. ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကျောက်ပန်းချီကားနဲ့ စေတီဘုရား မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ကဒါရပ်ကွက် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းကနေ တောင်တန်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင် ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ စေတီလေးဖူးတွေ့ရမှာပါ။ထိုစေတီလေးရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ နဂါးမယ်တော်ပုံပဲ […]
စစ်တွေမှာ ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့ လူပေါင်း ၁၂၀၀ ကို သွေးနမူနာရယူစစ်ဆေးမယ်
‌သွေးနမူနာရယူစစ်ဆေးမှုကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ စစ်တွေမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့ လူအုပ်စုတွေကို အဓိကထားပြီး သွေးနမူနာရယူစစ်ဆေးနေပြီလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေများပြီး အများပြည်သူနဲ့ ထိစပ် လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ ဆေးရုံ၊ IDP စခန်း၊ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၊ ဆေးခန်း၊ ဈေး၊ ဘဏ် ၊ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို အဓိက စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၂၀၀ ကို သွေးနမူနာရယူစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်ကစတင်ကာ သွေးနမူနာရယူစစ်ဆေးနေပြီး ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ စုစုပေါင်း အယောက် ၂၆၀ ကိုတော့ ဒီကနေ့မှာ စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ […]
မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား လူ သိနည်းသေးတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင်ငွေဝင်နိမိတ်များ
မည်သည့်နေရာ မြွေတွေ့တွေ့ ကံကောင်းအံ့။ သတ်မိလျှင် ထို နိမိတ်ပျယ်အံ့။ (ရှေ့မှကန့်လန့်ဖြစ်သွားမူ သင်လတ်တလောလုပ်မည့်ကိစ္စ အမှားဖြစ်အံ့။ ကြန့်ကြာအံ။) ပင့်ကူအိမ်တွင် သင့်နာမည် တစ်လုံးလုံးပေါ်နေမူ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေအံ့။အိမ်ထဲ ဌက်ဝင်လာမူ ငွေ ဝင်အံ့။ အိမ်ထဲ ဌက်သိုက်လာဆွဲမူ ချမ်းသာအံ့။ကလေးမွေးသည့်နေ့ သက်တံ့ထွက်မူ ထိုကလေး အောင်မြင်သူဖြစ်အံ့။ မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ သက်တံ့ထွက်မူ ထိုအိမ်ထောင် သာယာအံ့။ (သက်တံ့နှစ်ထပ်ထွက်လျှင်အလွန့်အလွန်ကံကောင်းအံ့) ဘယ်လက် ယားမူ ငွေဝင်အံ့။ ညာလက်ယားမူ ငွေထွက်အံ့။ လပြည့်နေ့ ငွေဝင်မူ ဥစ္စာတိုးအံ့။ထမင်းစားစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ငွေလာ ပေးမူ ငွေအ မြောက်အမြား ထပ်ဝင်အံ့။အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင်မူ ငွေရအံ့။အိမ်ထဲ ပိတုန်းဝင်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။တင်လိုက်သည့်အလံ ပြန်လျှောကျမူ ဘေးတွေ့အံ့။ခွေးလက်ဆောင်ရမူ၊ […]
သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတွေပါ။ ဘဝရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေ၊ အမှတ်ရစရာအဖြစ် အပျက်တွေအားလုံးမှာ သူငယ်ချင်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။ လူတိုင်းက သူငယ်ချင်းကောင်းလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ အရင်ဆုံးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အခုပြောပြမယ့်အချက်တွေက သင့်သူငယ်ချင်းအတွက် သင်ကသူငယ်ချင်းကောင်းတယောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သိနိုင်အောင်ပါ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ (၁) သူငယ်ချင်းကောင်းတွေက နားထောင်ပေးတယ် Source : Big Ideas Kid Coaching မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အချက်တချက်က သူငယ်ချင်းပြောတာကို ကောင်းကောင်းနား ထောင်ပေးတာပါ။ သူတို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးအကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ရင်ဖွင့်တဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့သေချာနားထောင်ပေးဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နားထောင်ပေးခြင်းက သူတို့ကိုဂရုစိုက်ရာရောက် ပါတယ်။ (၂) သူငယ်ချင်းကောင်းတွေက ရိုးသားကြတယ် Source : Pinterest ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တာက အကောင်းဆုံးမူဝါဒတခုလို့ပြောပါတယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းများအပေါ်ရိုးသားမှုရှိတာက သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြသရာရောက်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် အမြဲတမ်းရိုးသားတတ်ကြပါတယ်။ (၃) သူငယ်ချင်းကောင်းတွေက […]
ပြည်သူများ မပေါ့ဆကြပါနဲ့ လူနာသစ် ၉၅ ဦးတဲ့
ကိုဗစ် ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် ကိုဗစ် ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၉၃၂) ခု၊ – ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၁၈) ခု၊ – ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄) ခု၊ – ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊ – ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၃) ခု၊ – ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ […]
လ.ဝ.က သန်းခေါင်းစာရင်း အစီအရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားဦးရေ ကျဆင်းလာနေ
လ.ဝ.က လူဦးရေသန်းခေါင်းစာရင်း အစီအရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားဦးရေ ကျဆင်းလာနေ… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ ၅၄ ဒသမ ၇၆၈ သန်းလောက်ရှိပြီး အမျိုးသားဦးရေ ကျဆင်းနေတယ်လို့ ဒီကနေ့ ဩဂုတ် ၃၁ ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးအစီရင်ခံစာအရ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ယူခဲ့တဲ့ လူဦးရေသန်းခေါင်းစာရင်းအရ အမျိုးသမီး ၁၀၀ ဦးမှာ အမျိုးသား ၉၈ ဦးနှုန်းရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လူ ဦးရေသန်းခေါင်းစာရင်း အရတော့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ ဦးမှာ အမျိုးသား ၉၃ ဦးနှုန်းနဲ့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်းစာရင်းမှာတော့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ ဦးမှာ ၊ အမျိုးသား ၈၈ ဦးနှုန်းအထိဆက်လက် […]
မကြာခဏ ခေါင်းကိုက်တတ်သူတွေအတွက် အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းများ ခေါင်းကိုက်တာက တော်တော်လေးကို ခံရခက်စေတဲ့ ဝေဒနာတစ်ရပ်ပါ။ အချို့က တော်ရုံတန်ရုံ ခေါင်းမကိုက်တတ်ကြပေမယ့် ခေါင်းကိုက်ရင်ခံရခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပဲ ပိုပြီးခေါင်းကိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတွေကြုံလာရပြီဆိုရင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာမယ်၊ စိတ်လက်မကြည်မလင်ဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်စရာကိစ္စတွေကိုပါ ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့မှာခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အိမ်မှာပဲလွယ်လင့်တကူကုသနိုင်ဖို့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ မနက်နိုးနိုးချင်း ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ – မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ ပန်းသီးစိတ်ကို ဆားအနည်းငယ်နဲ့တို့စားပေးပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာ ရေနွေးသောက်ပေးတာကလည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သိသိသာသာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းအနေနဲ့ ပန်းသီးအရသာနဲ့ cider vinegar ကို ရေတစ်ခွက်၊ ပျားရည်နဲ့ သံပုရာရည်ရောစပ်ပြီး တစ်နေ့ကို (၂) ခွက်ကနေ (၃) ခွက်အထိ သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အပူအအေးဓာတ်ဖြင့် ကုသပေးပါ။ – ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ကျောကို ရေခဲအိတ်ကပ်ပေးတာက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာကို […]
နှာခေါင်းတို့ဖတ်၊ အာခေါင်တို့ဖတ်ယူရင် နာလား
အာခေါင်တို့ဖတ်၊နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူရင်သေအောင်နာမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါ။ နှာခေါင်းတို့ဖတ်၊အာခေါင်တို့ဖတ်တွေယူဖို့လိုသူတွေကို သေအောင် နာမယ်ဆိုပြီး ကြောက်လန့်အောင်ပြောထားတာတွေရှိတော့ အကြောက်လွန်နေကြပါတယ်။ လူတွေမှာလည်း ငါတို့တော့ ဒီအချောင်းကြီး နှာခေါင်းတဆုံးထိုးခံရ၊ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အော်ဟစ်၊ ကြောက်လန့် တာမျိုးတွေ ရှိပါမယ်။ တချို့ဆို ငိုယိုကြတယ်။ အဲတော့ အဲ့လိုအလုပ်မခံရအောင် Q မဝင်ရဲတော့ပါဘူး။ Q ဝင်ရမှာကြောက်လာရင် ရှောင်ပုန်းတာ တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ တို့ဖတ်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒုက္ခများပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ မနာပါဘူးပြောပေမယ့် တို့ဖတ်တံကိုင်လိုက်တာနဲ့ သံသယလူနာက ကြောက်နေပါပြီ။ ကြောက်တော့ ရုန်းတယ်။ တို့ဖတ်ယူ ဝန်ထမ်းတွေကို လက်နဲ့ပုတ်ထုတ်တယ်။တွန်းလွှတ်တယ်။ PPE ဝတ်စုံထဲကနေ ချွေးတရွှဲရွှဲ စောင့်နေရတဲ့ တို့ဖတ်ယူဝန်ထမ်းတွေအတွက်အတော်ကိုစိတ်ညစ်စရာပါ။ သေချာမသိဘဲ ထင်ရာပြောကြတော့ နှစ်ဖက်လုံးဒုက္ခများကုန်ကြပါတယ်။ တို့ဖတ်ယူတာ လွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းစဥ်ပါ ခါးလေးကို မတ်ပြီး ထိုင်လိုက်ပါ။ […]
ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကို ခဏဘေးဖယ်ပြီး ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုနေတဲ့ မြန်မာပြည် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အခြေအနေ
ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကို ခဏဘေးဖယ်ပြီး ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုနေတဲ့ မြန်မာပြည် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အရေးကြီး အခြေအနေ… ရခိုင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ် ရောဂါကို တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားကုသပေးနေပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်တဲ့ ရောဂါအခံရှိတဲ့ လူနာ ၃ ဦးရဲ့ အနေအထားကတော့ ပြင်းထန်မှုရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ တနေ့ထဲ လူ ၄၀၀၀ ကျော် ကူးစက်ပီး ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးသလို အင်ဒိုနီးရှားမှာလဲ တရက်ထဲ လူ ၂၀၀၀ ကျော် ကူးစက်ပီး သေဆုံးသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါကို လုံး၀ ပေါ့ဆလို့ မရသေးပါဘူး။ အာဆီယံဒေသကို တဖန်ပြန်လည်ရိုက်ခတ်နေလို့ သတိပြုရမှာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာတော့ စစ်တွေတက္ကသိုလ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို ယာယီဆေးရုံတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က […]